Linus Torvalds Inopomera Intel Kushaikwa Kwapararira RAM ECC Kugamuchirwa | Linux Vakapindwa muropa
Mukutsinhana kwazvino nezve kodhi ndangariro kururamisa kukanganisa (ECC ndangariro), Linus Torvalds, akashoropodza pachena Intel nekusatakura iyo ECC RAM kumapuratifomu makuru uye vakarumbidza AMD yekutsigirwa pamapuratifomu eRyzen.
ECC ndangariro ndeye mhando yekungofungidzira yekuwana memory ine kodhi yekugadzirisa iyo inokutendera kuti uone uye gadzirise akajairika marudzi e data huori. Rudzi urwu rwekurangarira runoshandiswa mumakomputa umo huori hwe data husingagoni kubvumidzwa pasi pemamiriro api neapi, senge ekuverenga kwesainzi kana emari.
Kune maindasitiri mazhinji, kana zvikanganiso zvakakura zvekuchengetedza zvikaitika, hapangovi nenjodzi yekurasikirwa nemari uye mune zvakaipisisa, chinzvimbo chekambani chinogona kushomeka zvakanyanya mumusika.
Mune ino mamiriro, iyo tsika yekugara uine yakawanda ndangariro inotsoropodzwa; kutaura zvazviri, paunowedzera kuwanda kwesimba rekuchengetera, inowedzera njodzi yekukundikana inowedzera. Ndicho chikonzero sevha nenzvimbo dzekushanda dzinoda kukwirira kwedata kwakasimba kusimbisa kudzivirirwa kwakazara kwedata. Semuenzaniso, ECC ndangariro inoshandiswa pachinzvimbo cheyakajairika RAM kuzvidzivirira zvirinani uye kudzivirira zvakapusa zvikanganiso.
Tichifunga izvi, Maitiro akati wandei akagadzirwa kuti agadzirise zvikanganiso zveyeuchidzo: kuronga ne immune immune kubvuma, parity bits, uye kukanganisa kugadzirisa kodhi ndangariro. Kushandisa ECC kwakafanana nekudana kodhi yedata ine kugona kuona uye kugadzirisa imwechete-bit zvikanganiso.
Uye zvakare, iyo ECC inogona zvakare kuona zvisingawanzo zvakapetwa kaviri-bit zvikanganiso. Kuti utore mukana weiyi nzira yekururamisa, zvakajairika kuwana mukana ndangariro (RAM) ma module anowedzerwa neiyo ECC memory module. Ndokusaka tichitaura nezve ECC RAM.
Pakupera kwezuva, pane kutengeserana pakati pekudzivirirwa pakurasikirwa kwe data uye mutengo wakakwira yekurangarira. Naizvozvo, izvi zvinoitwa nezvimwe zvinokanganisa:
Kukanganisa-kugadzirisa kodhi ndangariro kunodhura kupfuura kwakajairwa ndangariro nekuda kweyekuwedzera Hardware inodiwa kuti ibudise iyo uye yakaderera kugadzirwa mavhoriyamu eiyi ndangariro uye zvinowirirana zvikamu
Mabhodhi emamai, machipisi, uye mapurosesa anotsigira kukanganisa-kugadzirisa kodhi ndangariro zvakare anodhura nekuda kwezvikonzero zvimwe chete.
Error correction code memory inogona kuva 2 kusvika ku3 muzana inononoka kupfuura yakajairwa ndangariro nekuda kweiyo imwe nguva inodiwa yekutarisa kukanganisa nekugadzirisa.
Nekudaro, masisitimu emazuva ano anosanganisa kubata mukati meiyo processor, achibvisa iyo nguva inodiwa yekuongorora uye kugadzirisa memory yekuwana.
Linus Torvalds Maonero
Kana uchiudzwa, "Saka hongu, ndinobvuma zvachose kuti AMD inopa chibvumirano chiri nani. Zvisinei, iyo ECC haina basa pano ”, akapindura Linus Torvalds,
“ECC yakakosha chose.
"Kuwanika kweECC kwakakosha kwazvo, chaizvo nekuti Intel yakabatsira mukuparadza indasitiri yese yeECC ine chikamu chakashata chemusika.
“Enda uko uye unotsvaga maECM DIMM, zvakaoma chaizvo. Ehezve, pamwe zvese nekutenda kune AMD, inogona kunge yakavandudzika zvishoma munguva pfupi yapfuura, asi ndizvo chaizvo zvandiri kuzoita.
"Intel yanga ichikuvadza indasitiri yese nevashandisi nekuda kwemitemo yayo yakaipa uye isina kunaka kune ECC. Kunyanya.
"Uye kana iwe usinganditendi, tarisa kune akawanda mazera ekurangarira akaridzwa, uko nguva dzese Intel nevanogadzira ndangariro vachinyunyuta nezvekuti ichagadzirisa sei nguva inotevera."
Mune yako posvo, Torvalds anonongedza chigunwe kuIntel nekushomeka kwekupararira kweECC kutorwa munzvimbo huru.
Torvalds tenda izvi zvinokonzerwa nekuparara kwakazara Maonero eIntel ekutsigirwa kweECC mumashandisirwo ayo evatengi uye machipisi, achiti izvo zvoga zvakabvisa chero kukurudzira kune vanoita ndangariro kuti vagadzire desktop ECC ndangariro yeruzhinji.
Torvalds akarumbidzawo AMD nerutsigiro rwayo rusina kufanira rweECC. Kunyangwe izvi zviri zvisina tsigiro, Linus achiri kufara chaizvo kuti AMD iri kutowedzera sarudzo paRyzen mapuratifomu.
“Ini handina basa nekuti huchi system ine ECC kana kwete. Iri harisi iro dambudziko. Kana ini ndine ndangariro zvikanganiso, ini ndiri kunyatso kugona pakuzvigadzirisa. Zvakare, ndinopedzisira ndoshandisa michina isina "njodzi". Ndinoona kuti ndawana simba rakadarikidza, ndinogara kunyanya pamwero wegungwa, handipfuure, uye ndinotenga zvigadzirwa zvine mukurumbira, ”akadaro Torvalds.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linus Torvalds inopomera Intel nekushomeka kwekutorwa kwakawanda kwe RAM ECC
Linus yatokwegura, anoramba achinyunyuta zvakanyanya uye zvisina hwaro.
AlmaLinux, iyo CloudLinux imwe nzira kuCentOS 8
Gamuchira zvese nhau nezveLinux mune yako email.